Uyini neuritis umehluko emsipheni ebusweni?
Ngaphansi neuritis kwezokwelapha libhekisela isifo esithile sokuvuvukala nezinzwa neuropathy. Lesi sifo kanje. ezinzwa Okokuqala elikhanyayo (noma izingxenye zalo) ngqo obangela kulingisa kwelungelo noma ohlangothini kwesokunxele ebusweni. Kuphela ngemva kwenkathi kuqhathaniswa eside in iziguli livela lubonakale kakade ne nqunu iso asymmetry. Kulesi sihloko sichaza ngokuningiliziwe mayelana Imbangela kungenzeka yale nkinga, kanye Ukubheka indlela neuritis iphathwa we emsipheni ebusweni e imithi yesimanje.
izimbangela ngokushesha lesi sifo:
izinhlobo ezahlukene ukulimala ngemishini;
Okokuqala, kufanele uqaphele ukuthi neuritis we emsipheni ebusweni avele, ngokuvamile ngesimo ukungakhululeki njalo kanye nobuhlungu indlebe. Ngaphezu kwalokho, njengoba kuphawulwe ngenhla, kukhona asymmetry okuphawulekayo ebusweni. Iziguli ngokuvamile akhononde ephelele yokuntuleka esesuthi ngenxa ukulahlekelwa yizo zonke izinzwa zokunambitha. Kungenzeka futhi okungalindelekile amehlo zamanzi, enkeneneza ezindlebeni, ubuthakathaka, futhi ngaphezu kwalokho, ukukhuphuka elincane e nezinga lokushisa komzimba.
izindlela zesimanje uphethwe
Ukuze kahle ukuxilonga ebusweni emsipheni neuritis, zidinga ukuvakashelwa ngokushesha onguchwepheshe ezifanele. Udokotela kufanele ngempela ukuhlola isiguli, thola khona ezimpilweni ukucindezeleka ezingaba, imikhuhlane njalo (kuhlanganise viral) noma ukulimala lokukhanda. Uma uphethwe kuqinisekisiwe, kamuva esimisiwe abanekhono, futhi okubaluleke kakhulu, ukwelashwa ngabanye.
Neuritis we emsipheni ebusweni. Ukwelapha
Ngokusho kochwepheshe, manje lesi sifo kahle iphathwa ngoba izinhlobo ezihlukahlukene zezindwangu ezingaba noma imithi yolunye uhlobo. ukutshopa Ngokuvamile eyabelwe ne neuritis we emsipheni ebusweni. Ngaphezu kwalokho, acupressure ekhethekile esetshenziswa, kanye nabanye ababengewona ama-contact ukushisa, okuyinto kuyindlela ephumelela kunazo kuthinta inkinga. Qaphela ukuthi indlela ethile yokwelashwa kufanele ubeke kudorhodere kuphela, esekelwe isimo lesiguli, ubudala, kanye neminye imingcele ahlobene. Ezinye iziguli yenza ukusetshenziswa izinhlobo ezihlukahlukene zezindwangu ezingaba imithi engamakhambi, okuyinto yena, abe izindawo evelele eqeda ukuvuvukala, kanye kakhulu ngcono ukumelana lomzimba. Hhayi indima okungenani ekwelapheni nemidlalo kanye izinguquko ekudleni.
Neuritis we emsipheni ebusweni. imiphumela
Ekuphetheni, kufanele kuphawulwe ukuthi odokotela batusa ngokushesha ngangokunokwenzeka ukuze uqale ukwelashwa. Kungenjalo, emazingeni eziphambili ukuqeda nezindaba ezinzima ezifana kungaba nzima kakhulu. Ngaphezu kwalokho, kungenzeka akusiyo ukubuyisela ngokuphelele imisipha yobuso.
Isisu ubuhlungu nokuhlanza. Kungenziwa kanjani lokhu wachaza?
Kungani emibi ubuso: Izimbangela Nezingozi Ukwelashwa
Pyoderma ezinganeni: izimbangela, izimpawu kanye zokwelapha
Kuyini umuzwa Kufinyeta
Okhokho bethu zange alale kahle njengathi. Senzani okungalungile?
Kutfutfukiswa psyche ku phylogeny: Paradigm yokuhlaziya theory kanye nama-inqubo izinyathelo
Sandwich nge umvimba - zokupheka isidlo okusheshayo
A ikhambi ukubuyisa, ukuthi kungcono ukukhetha?
Modern umakoti yisihlengo isitayela Oriental